काठमाडौं। मानसिक अस्पताल पाटनका कन्सल्ट्यान्ट साइक्यास्ट्रिक डा. सुदिप अर्याल मृ’त अव’स्थामा फेला पर्नुभएको छ । आज दिउँसो बुढानिलकण्ठस्थित एक होटलमा उहाँ मृ’त फेला परेका हुन् ।
बबरमहलबाट अफिस जान्छु भनेर निस्किनुभएको उहाँ बुढानिलकण्ठस्थित होटलमा मृ’त अव’स्थामा फेला परेको सोही अस्पतालमा कार्यरत डा. बासु कार्कीले बताउनुभयो । डा. कार्कीका अनुसार त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट एमडी गरेका डा. अर्याल मानिसक अस्पतालमा कन्सल्टेन्ट थिए ।
भिम उपाध्ययको फेसबुक स्टाटस जस्ताको त्यस्तै :-
२०७८ असार ३१, बिहीबार ०९:३७ 1 Minute 184 Views